मदिरा विक्रेता र सेवन गर्नेमाथि कडा निगरानी राख्छाैं : मेयर शाही - Paschimnepal.com
मदिरा विक्रेता र सेवन गर्नेमाथि कडा निगरानी राख्छाैं : मेयर शाही
चामुण्डा (दैलेख) । जथाभावी मदिरा बेचविखन गर्नेलाई कडा कारवाही गरिने चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाको नगर प्रमुख सुर्यबहादुर शाहीले बताएका छन । शुक्रबार जम्बुकाँधमा प्रगतिशल नगर स्तरीय महिला संजालले सामाजिक कुसंस्कार विरुद्ध आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
मदिरा र लागु पदार्थकै कारणले महिला हिंसा र घरेलु हिंसा हुने भएकाले मदिराको प्रयोगलाई रोक्नका लागि नगरपालिकाले मदिरा कार्यविधि लागु भएको उनले जानकारी दिए । कोही कसैले मदिरा विक्रि वितरण र मदिरा उत्पादन गरेको पाइएमा मदिरा कार्यविधि बमोजिम कारवाही गरिने उनको भनाई छ ।
नगरपालिका र प्रहरी एक्लैको प्रयासले मात्र नियन्त्रण गर्न असम्भव हुने भएकाले मदिरा नियन्त्रण गर्नका लागि सबैको सहयोगको जरुरी पर्ने उनले बताए । साथै नगरवासीको जीउ धनको शान्ति सुरक्षाका लागि नगरपालिका कटिवद्ध भएर लागि रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘घरेलु हिंसा र महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्नका लागि महिलाहरु पनि आर्थिक रुपमा बलियो बन्नु पर्छ ।’ उनले भने– ‘जबसम्म महिलाहरु आर्थिक रुपमा बलियो बन्नदैनन्, तबसम्म समाजमा महिला हिंसा र घरेलु हिंसा कायम रहनेछ ।’ आर्थिक रुपमा बलियो बन्नका लािग अब महिलाहरु कृषिसंग जोडिनु पर्नेमा नगर प्रमुख शाहीले जोड दिए ।
कार्यक्रममा उप–प्रमुख ताराकुमारी शाही (खत्री)ले मदिराकै कारणले गर्दा पछिल्लो समय घरेलु हिंसा बढ्दै गएको बताईन । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरुलाई अनुसन्धान गर्दा अधिकांस घट्नाहरु मदिराकै कारणले हुने गरेको उनले बताईन ।
जबसम्म मदिरा पुर्णरुपमा नियन्त्रण हुदैन तबसम्म घरेलु हिंसाले जरा गाडी रहेने उनको भनाई छ । मदिराकै कारणले गर्दा बालबालिकाहरु सानै उमेरमा विवाह हुने गरेको बताईन । मदिरा सेवन गर्ने आफ्न्तहरुबाट बालिकाहरु असुरक्षित मसुस गरी सुरक्षीत स्थानको खोजीका लागि कम उमेरमै विवाह गर्ने गरेको उनले बताईन ।
प्रगतिशल महिला संजालका अध्यक्ष अम्बिका बोहोराको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमा वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष रंगबहादुर तामाङ, वडा नंं ३ का अध्यक्ष निरकबहादुर शाही, वडा नंं. ६ का अध्यक्ष बखतबहादुर बोहोरा लगायतले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, भदौ ३०, २०७५ 12:39:14 PM
Prevसर्पले टाेक्दा एककाे मृत्यु
Nextटेम्बो कम्पनीका कम मुल्यका स्क्रिन टच माेबार्इल सुर्खेत भित्रिए